Cali Fiqi: Qasab ma ahan in madaxweyne ku-xigeen uu yeesho Koonfur-Galbeed – Kalfadhi
Maamul-gobolleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya, ayaa leh madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenno, taas oo ku qoran dastuurka maamuladda. Balse maamulka Koonfur-Galbeed, tan iyo xiligii la aas-aasay wali ma uusan yeellan madaxweyne ku-xigeen, inkastoo dastuurkooda uu dhigayo in madaxweyne ku-xigeen uu yeesho maamulka.
Madaxweynihii ugu horreeyay ee Koonfur-Galbeed Shariif Xasan, ayaa loo arkayay in uusan raalli ka aheyn in maamulka uu yeesho madaxweyne ku-xigeen balse falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in madaxweynaha hadda ee maamulka uu aaminsanyahay falsafadii madaxweyihii hore ee ah in aan la sameynin ku-xgeen.
Koonfur Galbeed waa maamulka keliya ee Soomaaliya ee aan lahayn madaxweyne ku-xigeen tan iyo markii la aas-aasay sanadkii 2014-ka.
Qoddobka 45aad, faqradiisa 3aad ee dastuurka ku-meelgaarka ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa dhigaya in madaxweynaha uu magacaabo madaxweyne ku-xigeenadda isaga oo la tashanaya odayaasha dhaqanka, balse arrintaas wali ma aysan dhicin oo tan iyo markii la yagleelay Koonfur Galbeed.
Dastuurka ayaa dhigaya in masuuliyadaha madaxweynaha ay kamid tahay in uu magacaabo madaxweyne ku-xigeenno. Haddii Madaxweynaha uu magaabi waayo ku-xigeennada taas waxaa ay kasoo horjeedaa dastuurka maamulka.
Bishii lasoo dhaafay ee March, maamulka waxaa loo dhisay Baarlamaankii labaad, kaas oo doortay Guddoomiyaha golaha wakiiladda iyo ku-xigeennadiisa.
Safiirkii hore ee Soomaaliya u joogay xarunta Midowga Yurub ayaa loo doortay Guddoomiyaha cusub ee baarlamaan goboleedka Koonfur Galbeed Dr. Cali Saciid Fiqi.
Dr Cali, ayaa aaminsan in kursiga madaxweyne ku-xigeen la sameyn doonno haddii gobolka uu muhiim u arko. Haddii uusan u arkina muhiim, qasab ma ahan in madaxweyne ku-xigeen aan yeellano, maxaa yeellay madaxweyne iyo guddoomiye Baarlamaan ayaa jooga, ayuu yiri.
Dhinaca kale waxaa jira dad badan oo aaminsan in ay jiri karto in sababta loo sameyn la’yahay madaxweyne ku-xigeen ay tahay in madaxweynaha jooga kursiga uu diidayo is qab-qabsi siyaasadeed oo ka dhex dhasha maamulikiisa, maadaama deeganakiisa ay degan yihiin dhammaan beelaha saamiga qebysiga awoodda ee 4.5, taasina ay keeni karto caqabada culus.
Mar uu ka hadlayay xiliga maamulka Koonfur-Galbeed uu u guurayo magaala madaxwda maamulka ee Barawe ayaa waxaa uu yiri “Magaallo si ay magaallo u noqoto waxaa ay u baahantahay diyaar-garoow. Dadka meesha aadaya waxaa ay u baahanyihiin meel ay degi karaan iyo xafiisyo, sidaasi awgeed si tartiib-tar-tiib ah ayaan u diyaarineynnaa. Wakhti aan sheegi karo oo aan u guuri karnno magaalada ma jirto, balse dowladda koonfur-galbeed waa ay ka go’antahay”.